NVIDIA kwuputara Nwepu nke Mmemme Onye Mmekọ | Akụkọ akụrụngwa
Mmemme GeForce Parter (GPP) nke NVIDIA kwupụtara ozugbo ọ tara nnukwu ahụhụ na ngwụsị ọnwa Machị. Ebe ọ bụ na akụkọ nyocha kwuru na ụdị a bụ iwu na-akwadoghị na mgbochi asọmpi. Ihe mere ka ihe ndi ozo malite ime nyocha ya ma jua ike nke ndi ulo oru a. Nkatọ ahụ akwụsịbeghị n'oge a.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị kọwara atụmatụ NVIDIA dị ka nsogbu. Ebe ọ bụ na site na mmemme a, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro ụfọdụ ndị nrụpụta. Na nloghachi, ha na-elekọta idozi ụfọdụ ezinụlọ ngwaahịa maka naanị ha. Ọ bụ ezie na nke a ga-abịa na njedebe.
N'ihi na NVIDIA mechara kwupụta na ha ga-akagbu mmemme a. Yabụ mpaghara ahụ nwere ike ịdị jụụ ma ụlọ ọrụ ahụ kwupụta ọkwa a. Ebe ọ bụ na nkatọ akwụsịghị n'oge a. Ya mere ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe nrụgide ahụ.
Site na mmemme mmemme a ụlọ ọrụ chọrọ A ga - ejikọ ngwaahịa gị na ụfọdụ ezinụlọ ngwaahịa ngwaahịa nke ndị nrụpụta eserese, dị ka MSI. N'ụzọ dị otú a, ụfọdụ n'ime usoro MSI ga-echekwa naanị maka eserese NVIDIA. Yabụ, AMD enweghị ike ịgụnye usoro ndị dị na ngwaahịa ya. Yabụ ọ ga - egbochi Ọganihu AMD n'ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ha kagburu ihe nkiri ahụ iji kwụsị ụgha na asịrị ndị pụtapụtara gburugburu otu izu ndị gara aga. Ọ bụ ezie na ha achọghị ịnyekwu nkọwa gbasara ya. Mana n'ezie enwere ihe ozo mere eji kagbuo oru ngo ya n'ozuzu ya.
O yikarịrị ka mbibi ihe oyiyi nke ọrụ a mere ka NVIDIA nwee ihe ọ ga-eme.. Ebe ọ bụ na ndị nkatọ dị ọtụtụ n'oge a, ọtụtụ si na mpaghara ahụ. Yabụ na onyonyo na aha ọma nke ụlọ ọrụ ahụ enwetabeghị oge kachasị mma. Kagbu ọrụ ahụ bụ nzọụkwụ dị na ụzọ ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » NVIDIA mechara kagbuo mmemme mmekọrịta ya na esemokwu
Disney na-ewere ezigbo eziokwu dị iche iche na jaket a dị egwu